စည်းရိုးထိုးမဲ့သူများ က အိမ်ကျယ်ပါဆို အိမ်သားတွေသာ ဖိထောင်းတတ်တာ။ အိမ်ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ ခံရတာချည်းဘဲ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Don’t cry for the personal attack on your family members, U Ye Htut as you have done the same dirty attack on my family
American rap singer, Agron Belica sang for vulnerable Muslims of Myanmar (Burma) »
စည်းရိုးထိုးမဲ့သူများ က အိမ်ကျယ်ပါဆို အိမ်သားတွေသာ ဖိထောင်းတတ်တာ။ အိမ်ပြင်ထွက်လိုက်တာနဲ့ ခံရတာချည်းဘဲ
မဘသ မဟန ၉၆၉ မျီုးချစ်များ ငါတို့အးရိုးစည်းရိုးထိုးမဲ့သူများ
Thuzar Mdy Thuzar Mdy shared The Ladies News Journal‘s post.
တရုတ်လေး ငါးယောက်သေတာ များ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်ပြီး တောင်းပန် နေရင်
ငါတို့ မြန်မာ့မြေထဲ တရုတ်ခွေးသူခိုးတွေ သူခိုးကျင့် သူခိုးကြံနဲ့ သစ်တွေ အလုံးအရင်း နဲ့ အလှူကြီး ပေးသလားထင်ရလောက်အောင် လာဝင်ခိုးနေတာ တွေနဲ့ ကါးအစီးပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့ ဘယ်အချိန်တွေထဲကမှန်းမသိ လာခိုးပြီး တင်ယူသွားတဲ့သစ်တန်ပေါင်း မြောက်များစွာ ကိစ္စ ကိုရော ?? မူဆယ်မြို့ထဲအထိ လာပြီး ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုး တယောက် ကို ဥပဒေမဲ့ တံခါးမရှိ ဓါးမရှိ ကါးနဲ့ဝင်လာပြီး သတ်သွားတာမှမကြာသေးခင် လအနဲငယ်ဘဲရှိသေးတာနော် ဒါကိုရော သူတောင်းစားခွေးတရုတ်တွေဘက်ကတောင်းပန်ခဲ့သလား
ဒီအစိုးရကရော အရေးတယူဖြေရှင်းပေးခဲ့သလား ?? ကိုယ့်လူမျိုးထိတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင် လျှစ်လျူရှု့ပြီး
သူတို့ရဲ့နယ်စပ်မှာနေတဲ့ အစုတ်အပြတ် တရုတ် လေး ငါးယောက်လောက်သေတာကိုများ ဘာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းမူ ကြီး (5)ချက်နှင့်အညီလဲ ?? ဘာသံတမန်လမ်းကြောင်းလဲ?? လုံးဝဆန့်ကျင်တယ် စစ်ခွေးတွေ ပထွေးတော်တော်ကြောက်နေရသလား?
တောင်းပန်တဲ့အထဲမှာ ငါတို့ပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ဆန္ဒ မပါဘူး ။ ဒူးတုန်အောင်ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းက တရုတ်ဘဏ်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ နင်တို့ရဲ့အကောင့်တွေ ထဲကပိုက်ဆံ တွေ ကို စာရင်းပိတ် ဗြောင်သိမ်းပစ်လိုက်မှာစိုးရိမ်တာက အများဆုံးထင်ပါရဲ့ ။ဒါက ဝဠ်ကြီးကြီး လည်နေတာနော် လက်ပံတောင်းကြိမ် စာတွေ အစွမ်းပြနေပြီ ။ အရူးမီးဝိုင်း တာ ထိုင်ကြည့် နေကြမယ်။ တန်ပြန် အသံတိတ် သပိတ် ပေါ့ ။ ရှင်းရဲ့လား !!! ‘ကူးလါသောမန့်
This entry was posted on March 16, 2015 at 1:48 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.